Vectrix VX-3 – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
ကို 4-6 နာရီ
ကို 21 kW (28.2 ကိုမြင်းကောင်ရေ)
✓ သုံး Wheeler
ကို 1,000 သံသရာℹ
အဆိုပါ VX-3 အမေရိကန်နှင့်ပိုလန်အတွက်လျှပ်စစ် Scooter စက်ရုံအားဖြင့် 2016 ခုနှစ်တွင်အသက်ပြန်ရှင်ဖို့ယူဆောင်ခဲ့သောလျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်အတွက်ပထမဦးဆုံးရှေ့ဆောင်တဦးတည်းအနေဖြင့်မူလကအမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Vectrix တစ်ဦးကုမ္ပဏီကနေလျှပ်စစ်သုံး Wheeler Scooter ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Vectrix VX-3 110 km / h ၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းများအတွက်အစွမ်းထက် 21,000 ဝပ်လျှပ်စစ်မော်တာရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter 128 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတစ်ခုလီသီယမ်ဘက်ထရီရှိပါတယ်။ အဆိုပါတာဝန်ခံအချိန် On-board ကို charger ကို အသုံးပြု.4မှ6နာရီဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter အများအပြားအရောင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကို 2020 Vectrix ကိုမော်ဒယ်များ
Vectrix ဆိုင်ကယ်အားလုံးကို filter ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွင်ကြည့်ပါ။
Vectrix Sp. z o.o. (Ltd)
ul. E. Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław, Poland
Phone: +48 510 167 338